Brenda Hillman – zlkontempo
Posted on January 19, 2013 | by zlkontempo | LeaveaComment on ဘရင်ဒါ ဟစ်လ်မင်းန်ရဲ့ စပ်ကြောင်းကဗျာဗေဒ
အမေရိကန် ကဗျာဆရာမ ဘရင်ဒါ ဟစ်လ်မင်းန် Brenda Hillman ဟာသူမရဲ့ ကဗျာဗေဒကို Seam Poetics `စပ်ကြောင်း ကဗျာဗေဒ´လို့ Reginald Shepherd တည်းဖြတ်ထုတ်ဝေတဲ့ Lyric Postmodernisms ကဗျာပေါင်းချုပ်မှာ ရေးသားဖေါ်ပြထားပါတယ်။ သူမရဲ့ အဆိုပါ အရေးအသားထဲက ကောက်နှုတ်ချက်အချို့ကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
. . . ခရိုက်စလာ ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ မော်တော်ကားတွေထဲမှာ power steering တပ်စင်လိုက်တဲ့ နှစ်မှာ ကျွန်မမွေးဖွားခဲ့ပါ တယ်။ ကျွန်မကို ကဗျာရေးဖို့ ပြင်ဆင်ပေးခဲ့တာတွေကတော့ `သဘာဝ´၊`ဂီတ´နဲ့`မမြင်ရတဲ့ အလွှာအထပ်ထပ်တွေ´ဖြစ်ပါ တယ်။ . . . ကဗျာဟာ ကျွန်မကို ရင်သပ်အံ့ဩစေတယ်။ ကလေးတွေဟာ ကဗျာကိုဘာကြောင့် ကြိုက်ကြသလဲဆိုတော့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ သိရှိမှုနဲ့ ပကတိအရှိတရားဟာ ဆက်စပ်မှုမရှိပဲ အကြီးအကျယ်ကွာဟနေလို့ပဲ။ ကျွန်မငယ်စဉ်က အမေရိ ကန်ကဗျာဆရာမတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Denise Levertov ဆီစာနဲ့ရေးပြီးမေးဘူးတယ် ၊ ကလေးမအရွယ်လေးတစ်ယောက်ဟာ ကဗျာဆရာမ ဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်မလဲ။ သူမက ကျွန်မဆီစာပြန်လိုက်ပါတယ်။ `သမီးရဲ့ကဗျာတွေထဲမှာသူများခိုင်းတာတွေ မလုပ်နဲ့´တဲ့။ . . . နာမည်ကြီးကဗျာဆရာတစ်ယောက်ပြောတာကြားဘူးတယ်၊ `မော်ဒန်ကဗျာဆရာကြီးတွေဟာ ကဗျာကို ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်´တဲ့။ အဲဒါဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ပါ့မလဲ။ မော်ဒန်ကဗျာဝါဒဟာ သိစိတ်ကို အသစ်တဖန်တီထွင်ခဲ့တယ် ၊ မြို့ပြ တွေမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ပိုင်းဆစိပ်မွှာ ဘ၀တွေကို အသစ်တဖန်စိတ်ကူးခဲ့တယ် ၊ အရှိတရားနဲ့ သော်၎င်း ၊ သဘာဝနဲ့သော်၎င်း ၊ ကင်းကွာနေတဲ့စိတ်ကို ထည့်သွင်းခဲ့တယ် ၊ မသေချာမရေရာမှု ဖြစ်စဉ်တွေကို နေရာပေးခဲ့တယ်။ Continue reading →
Posted in Articles, Info | Tagged Articles, Brenda Hillman, Seam Poetics